Panpyoelat | Media & Entertainment | Page 6
Celebrity Kyaw Htet - November 30, 2020 0
ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ သီချင်းတွေကို မြူးမြူးကြွကြွ သီဆို တတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး အမွန်းကတော့ လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူတစ်ယောက် ဖြစ် ပါတယ်။ အမွန်းကတော့ သူမရဲ့ ဂီတလမ်းကြောင်းလျှော က်လှမ်းမှုကိုသာမက သူမရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သတ်ပြီးလည်း ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တ ယ်။ အမွန်းရဲ့ ချစ်သူကတော့...
ပရိသ တ်ကြီးရေအေးဝတ်ရည်ေ သာင်းကတောဆယ်စုနှစ်တစ်ခု အကျော်ထဲက ပုရိသတွေပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါနော်။ ဆံပင်အရှည်ကြီး နဲ့တမူးထူြး ခား တဲ့မင်း သ မီးကတော့အခုချိန်မှာလည်း ပုရိသယောကျာ်းတွေရဲ့ အ သည်းစွဲ မြန်မာဆန်ဆန်ပုံရိပ်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။ အချိန်အတော်ကြာ အနုပညာခြေ လှ မ်းေ တွကြဲခဲ့ပေမယ့် ပထမဆုံးပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မုန်းစွဲရုပ်ရှ င်ဇာတ်ကားကြီးမှာလည်း အကယ်ဒမီဇာတ်ပို့ဆုကို မျှော်မှန်းခံခဲ့ရတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်း ဇာတ်ကားတွေ ထပ်...
AI overtook human champions in the world’s toughest poker game
News Kyaw Htet - November 26, 2020 0
It's hard to believe that after eight days of playing one of the most complex poker games in the world, you can win the championship. But Pluribus AI (artificial intelligence)...
He flewajet-powered flight board across the English Channel in 22 minutes
News Kyaw Htet - October 27, 2020 0
French inventor Fran ကီois P ပါter, for the first time, flew across the English Channel usingajet-powered flight board. Zapata left the Carlisle, France, at 6:17 a.m. local...
Intelsat 39 communications satellite successfully launched with Myanmar-owned satellite transponder
Celebrity Kyaw Htet - October 26, 2020 0
The Intelsat 39 communications satellite, which includes Myanmar-owned satellite transponders, will be launched at 4:17 a.m. US time (2am Burmese time). The Ariane Space Launch Base on the French...
Huawei and Rainforest Connection launch technical partnership to protect Sumatra forests
News Kyaw Htet - October 23, 2020 0
Huawei Indonesia has launchedapartnership with Rainforest Connection (RFCx) to turn Recycled Cell Phones intoasolar-powered hearing device. The partnership aims to protect the rainforest in Sumatra....
အတွင်းအလှတွေကို ဆက်ဆီကျကျ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
ဘာလူမျိုးလဲ လာလာမေးနေလို့ ပြန်ဖြေပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ “နန်းမွေစံ”
ရွှေရင်အမြွှာ အရှင်းသားပေါ်လွင်စေတဲ့ အမိုက်စားအတွင်းအလှတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့ မျက်ဝန်း
Live လွှင့်ရင်း ရွှေရင်ထိပ်ပိုင်းလေးပေါ်လွင်အောင် ဖျစ်ညှစ်ပြလိုက်တဲ့ Xmue Xmue ရဲ့ ဗီဒီယို
Google sells high-end Pixel smartphones atadiscount